Ukusinda – iAfrika
Angibasoli abantu abadala ngokwazisa imfuyo nokuthanda kangaka njengoba ngisho sesiphila ngesilungu kepha imfuyo namanje isadlela ogageni. Phela imfuyo lena ikakhulukazi izinkomo nezimbuzi azigcini ngokusebenza noma ukusetshenziswa uma kwenziwa imicimbi yesintu kuphela, noma-ke uma kuthengiselwana kuphela kepha zisebenza ngisho isilwane leso sesifile. Isibonelo nje, izikhumba zenkomo zisetshenziswa uma kwakhiwa izidwaba kanye namabheshu, kahlekahle nje zisetshenziswa uma kwakhiwa imvunulo, kanti isikhumba sembuzi sona sisetshenziswa uma kwakhiwa isikhumba sokuhlala phansi ngoba phela izitulo zifika manje emandulo bekusetshenziswa zona izikhumba lezi ukuhlala phansi bese kuthi abanumnzane basebenzise izigqiki-ke bona. Kule ngosi-ke sikhuluma ngendaba yokusinda phansi endlini, kungaba isexhibeni, isendlini kaSokhaya okunye noma ngabe iyiphi indlu yasekhaya egcekeni ngoba ngokujwayelekile zonke ziyasindwa uma zihlanzwa zenzelwa ukuthi ziqhakaze kahle zibukeke.
Uma ke kusindwa kusetshenziswa ubulongo benkomo obukhiwa esibayeni sazo izinkomo, kanti-ke kule mizi engenazo izinkomo nayo yayicela komakhelwane abafuyile becela bona ubulongwe. Ngokwakulindelekile ukwenzeka kwakusinda ikakhulukazi abantombazane ekhaya okanye unina wabo obazalayo. Umlobokazi ekhaya wayengasindi kuzo zonke izindlu noma ngithi nje kuzo zonke izinhlangothi zendlu. Ekhaya kunendlu yabadala, kule ndlu-ke umlobokazi wabe engavunyelwe ukuwelela ohlangothini lwabantu besilisa ngoba phela usuku ehlonipha. Silana-ke, ubulongwe buhlanganiswa ngamanzi, bugaywe bube manzi ukuze kuzosindwa ngabo phansi, bugayelwa endishini kulesikhathi samanje kanti ke emandulo babugayelwa embizeni esetshenziswa uma kusindwa. Uma ususinda ubuthela phansi ubulongwe la ozosinda khona, bese usinda ngezandla sabudonsa ubulongwe, uma kusindwa kuqalwa emsamo, kwehliwe ngayo indlu kuze kuyophunywa emnyango, lokhu kwenzelwa ukuthi ungahambi phezu kwabo ubulongwe la osuke ususinde khona endlini. Emva kokuthi lo osindayo aqede, uyaye avule emnyango kushaye umoya endlini la akasindela khona khona kuzokoma phansi kuwuma kungena abantu khona endlini sebomile ubulongwe obekusindwa ngabo. Ukusinda-ke lokhu kusayiyona ndlela yesintu yokuhlanza indlu ibe yinhle ekhaya, kanti-ke odongweni lwendlu eyakhiwe ngodaka bekupendwa ngomcako ukuze ibe yindle yona ifakwe nebomvu ngaphakathi. Isizathu sokuthi kusindwe ingoba emandulo ibingekho le nto esibizwa ngokuthi ukukhonkwa kwendlu manje kepha indlu ibigandwa ifakwe insizi emnyama kanti uma ingagandiwe bekusetshenziswa bona ubulongo lobo phansi.
Tags Ubulongo, Ubulongwe, Ukuhlanza, Ukukhonka, Ukusinda
2 thoughts on “Ukusinda”
Ukuphupha kusindwe phansi ngodaka
Cofa lapha ukuthola impendulo Amaphupho ngodaka